Bollywood Iyo Fayraska Corona:- Sida Uu Cudurka Usaameeyay Qoysaska Jilaayaal Caan ah | Gaaroodi News
Bollywood Iyo Fayraska Corona:- Sida Uu Cudurka Usaameeyay Qoysaska Jilaayaal Caan ah
Amitabh Bachchan iyo Anupam Kher
Hindiya, oo markii hore xannibaad la geliyay, haddana dibna loo furay si dhaqaalaha loo badnaadiyo, waxaa ku sii badanaya tirada kiisaska cudurka korona.
Hadda, waxaa maalin kasta laga soo sheegaa illaa 30,000 oo kiis oo cusub – taas oo ka badan tirada dalalka caalamka oo dhan marka laga reebo Mareykanka iyo Brazil.
Tirada guud ee illaa iyo hadda laga soo sheegay Hindiya waxay ka badan tahay 850,000, waxayna ku dhowdahay in Brazil ay dhaafto.
Haddaba, waxaa sare u kacaya saameynta uu xanuunka ku yeelanayo shirkadda aflaanta ee Bollywood. Wuxuu gaaray guryaha qaar ka mid ah xidigaha caanka ah. Haddaba aanu eegno sida uu u saameeyay qoysaska qaar:
Qoyska Amitabh Bachchan (Cali Dheere)
Waxay ahayd maalintii keliye ee in ka badan 28,000 oo kiis oo cusub laga soo sheegay Hindi, balse qoyska hal nin – Amitabh Bachchan – ayaa dareenka caalamka oo dhan qabsaday. Warbaahinta dunidana si wayn ayey u hadal haysaa.
Amitabh waa jilaaga ugu wanaagsan Bollywood, waana nin si wayn looga xushmeeyo, loogana jecel yahay dalka Hindiya iyo daafaha caalamka.
‘Cali Dheere’ ayaa Sabtidii shaaciyay in cudurka corona laga helay. Wuxuu farriin ku baahiyay bartiisa Twitter-ka oo ay ku xiran yihiin illaa 43 milyan oo qof.
Wiilkiisa, Abhishek iyo gabadha uu sodogga u yahay ee Aishwarya Rai Bachchan, ayaa sidoo kale laga helay cudurka.
Labadan lamaane ayaa sidoo kale ah jilaayaal caan ah oo aad looga garanayo Hindiya. Sidoo kale, gabadhooda Aaradhya oo 8 sano jir ah ayuu ku dhacay cudurka coronavirus.
Aishwarya Rai Bachchan, oo ah 46 sano jir, ahna atariisho caan ka ah Hindiya iyo daafaha caalamka, ayaa sannadkii 1994-tii noqotay gabadha ugu quruxda badan dunida.
Hadda waxay tahay wakiilka Sama-doonka ee UNAIDS u qaabilsan caalamka. Waxayna ahayd atariishadii ugu horeysay ee Hindiya ee xubin ka noqotay Xeer-beegtida Cannes Film Festival. Abhishek, Aishwarya iyo gabadhooda 8 sano jirka ah ayaa dhammaantood laga helay fayraska Covid-19
Amitabh Bachchan oo illaa seddax jiil la soo jilay aflaan badan iyo wiilkiisa Abhishek ayaa isla sabtidii la dhigay isbitaalka, balse lama sheegin sida ay xaaladdooda tahay in kastoo Abhishek uu sheegay in xaalad deggan ku jiraan.
Abhishek Bachchan wuxuu Twitter-ka soo dhigay in uu isbitaalka ku sii sugnaanayo inta ay dhaqaatiirta ka go’aansanayaan xilliga uu ka soo baxayo.
Qoyska Anupam Kher (Aa Baska)
Anupam Kher hooyadii iyo laba qof oo kale oo ka mid ah qoyskiisa ayaa laga helay fayraska Covid-19.
Anupam hooyadii oo lagu magacaabo Dulari ayaa la seexiyay isbitaal ku yaalla Mumbai, iyadoo inta kale ee qoyska lagu karantiilay gurigooda.
Jilaagan caanka ah ee qaar ka mid ah taageerayaashiisa Soomaalida ay u garanataan ‘Aa Baska’ ayaa Axaddii shaaciyay in xubno ka mid ah qoyska laga helay xanuunkan dunida faraha ba’an ku haya.
Anupam wuxuu bartiisa Twitter-ka ku sheegay in dhammaan xubnaha qoyska ee laga helay cudurka ay xaaladdooda wanaagsan tahay.
Wuxuu farriinta uu baahiyay ku sheegay: “Aniga xitaa waa la iga baaray cudurka, waana la iga waayay”.
Bhanurekha Ganesan (Rekha Dheerey)
Bhanurekha Ganesan, oo muddada dheer ku dhex jirtay aflaanta iyo Bollywood ayaa la geliyay karantiil ka dib markii fayraska Covid-19 laga helay mid ka mid ah ilaaladeeda. Rekha ayaa ku biirtay siyaasadda
Hay’adda Maamulka Brihanmumbai (BMC) ayaa sheegtay in askerigaas loo kexeeyay xarun karantill iyo in xaaladdiisa ay wanaagsan tahay.
Sidoo kale, Dhammaan shaqaalaha ka shaqeynayay xafiisyada u dhow mid keeda ayaa laga wada helay cudurka.
Lama shaacin sida ay tahay xaaladda guud ee qoyskeeda, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in Rekha Dheerey, oo 65 sano jir ah, ay dooneyso in si iskeed ah ay baaritaanka isugu sameyso ka dibna warbixinta shaacin doonto.
Atooraha caanka ah, Aamir Khan ayaa Arbacadii aanu soo dhaafnay sheegay in hooyadii laga waayay xanuunka coronavirus, maalin ka dib markii fayraska laga helay qaar ka mid ah shaqaalihiisa. Jilaagan iyo qaar kale oo ka mid ah qoyskiisa ayaa sidoo kale laga baaray fayraska Covid-19, waana laga waayay.
“Hello qofkasta, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan idiin sheego in Ammi laga waayay cudurka. Qof kasta waad ku mahadsan tahay ducada”, ayuu yiri Aamir Khan.
Wuxuu sidoo kale xaqiijiyay in qoyska oo dhan la karantiilay ka dib markii qaar ka mid ah shaqaalihiisa laga helay cudurka.